ဖြစ်ရပ်မှန်(၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖြစ်ရပ်မှန်(၄)
Posted by Main Computer on Jul 19, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
ဖြစ်ရပ်မှန်(၄) လူ့အသက်နှင့်ဥပဒေ ည၈နာရီခွဲခန့်ကွန်ပျူတာမှအင်တာနက်ဖွင့်ကြည့်နေတုန်းအိမ်ရှေ့မှခွေးအော်သံလိုလို၊လူအော်သံလိုလို ကြားလိုက်ရသည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုဝုန်းကနဲအသံကြယ်လောင်စွာကြားရပြီးလူအများအော်ပြီးပြေးသံကိုပါ ကြားလိုက်ရသောကြောင့် ဝရန်တာမှထွက်ကြည့်လိုက်တော့ ဘုရား ဘုရားကောင်မလေးတစ်ယောက်လမ်းပေါ် မှာလဲလို့နာကျင်စွာအော်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကားတိုက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ တိုက်သောကားနောက် လိုက်ကြ သောသူများမှာကားကိုမမှီတော့။ တွေ့လိုက်သူများက ကားမှာနံပါတ်မတပ်ရသေးသော ကား အသစ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့ စင်္ကြာလမ်းအတွင်းမှအရှိန်ဖြင့်မောင်းထွက်လာပြီး သင်္ဂဟလမ်း ပေါ် လျှောက်လာသော မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုဝင်တိုက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ လဲကျနေသောကောင်မလေးမှာနာကျင်စွာအော်ရင်းဘေးမှတစ်ယောက်ကထူမရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ် မည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်ဝိုင်းအုံလာသောလူစုမှာကောင်မလေးများကိုပြုစုရန်ဆေးခန်းဆေးရုံပို့ရန်မစဉ်းစား။ တိုက်သွားသောကားအကြောင်းပြောရင်း ရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်သူကဆက်သည်။ ကောင်မလေးကတော့ နာကျင်စွာအော်ဟစ်တုန်း။ ၁ဝမိနစ်ခန့်ကြာတော့ရဲနှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်နှင့်ရောက်လာသည်။ ဘေးမှလူများကိုဟိုမေးဒီမေး။ကောင်မလေးများကိုမေးမြန်စစ်ကြောနေသည်။ မေးမြန်းရင်း၁ဝမိနစ်ခန့်ကြာတော့ကောင်မလေး(၂)ယောက်စလုံးနာကျင်စိတ်ကြောက်လန့်စိတ်နှင့်သတိလစ် သွားတော့သည်။ထိုအခါမှလူအုပ်ထဲမှမနေနိုင်သောလူများက ကားအမြန်ငှားပြီးဆေးရုံကြီးသို့လိုက်ပို့လိုက် ရသည်။အချိန်မှိကုသမှုမခံလိုက်ရသောကောင်မလေး(၂)ယောက်အခြေအနေမှာ ရှေ့ဆက်မည်သို့ဖြစ်မည်မသိ။ ရင်ထဲအလွန်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။ တကယ်တော့ရဲ(၂)ယောက်မှာလည်း အမှုတစ်ခုဇစ်မြစ်ကိုသိရန်မြက်မြင်သက်သေနှင့်ကာယကံရှင်များကိုဥပဒေနည်းလမ်းအတိုင်းမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။(ကောင်မလေး(၂)ယောက်ကိုဆေးရုံဆေးခန်းအမြန်ပို့ပြီးသတိရမှစစ်ဆေးမေးမြန်းရင်မရဘူးလား)။ မြက်မြင်သက်သေများကလည်း ယာဉ်တိုက်မှုဆိုသောမှုခင်းတစ်ခုဖြစ်နေသောကြောင့် ဒဏ်ရာရသူ လူနာကိုသွေးထွက်လွန်ပြီးသေသွားသည်ဖြစ်စေ။ရဲလာပြီး။အမှုဖွင့်ပြီး၊မှုခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှကူညီသင့်တာကိုကူညီလို့ရနိုင်ခြင်း။(ဖြစ်ရပ်သည်အများမြင်လိုက်ရသောဖြစ်ရပ်။သက်သေအများရှိပြီး၊အမြန် ဆုံးဆေးရုံပို့ကုသစေပြီးမှပြသာနာကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းရင်ကော မရဘူးလား။လူ့အသက်နှင့်မှုခင်းဖေါ်ထုတ်မှု ဘယ်အရာကပိုပြီးအရေးကြီးသနည်း။)
About Main Computer
Myo Nyunt has written4post in this Website..
View all posts by Main Computer →
တကယ်တော့ဒီဖြစ်ရပ်ကပြီးခဲ့တဲ့(၂)ရက်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ညတွင်းချင်းရေးတင်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်
computer ဆိုတဲ့နာမည်လေးက Log inလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့အထိမရတာနဲ့ Main Computer
ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Register အသစ်လုပ်ပြီးရေးတင်လိုက်ရတာပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဖြစ်ရပ်မှန်(၁)အခွန်
ကိစ္စကိုရေးတင်ခဲ့တဲ့ computer လေးပါပဲ။ အလုပ်တာဝန်တွေမအားလပ်လို့ အတန်ကြာပျောက်နေခဲ့ရတဲ့
အတွက်ခွင့်လွှတ်ကြပါ သူကြီးနှင့် ဆရာကြီးမိုက်အပါအဝင် ဝိုင်းတော်သားများခင်ဗျား။
နောက်ထပ်တွေ ့တာလေးတွေလဲ ပြောပြပေးပါဦးနော
ဒါတွေကတော့ များနေပါပြီ ….. ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ကြာမယ် ပြီးရင် ဆေးရုံမှာ ကြာမယ် … ဆေးရုံမှာ ရဲသာမပါရင် တော်တော်ရစ်တာ … လူနာကသွေးတွေ အရမ်းထွက်နေပီ ဆေးရုံက မကုရဲသေးလို့ ရဲစခန်းမှာ ရဲကိုသွားခေါ်နေရတယ် ….. ဖြစ်ပုံက တော့ ချောင်းရိုက်ခံရတာ …. ဆေးရုံတွေမှာတောင် ရဲသားတွေ ထားသင့်နေပီ …………..
စိတ်မကောင်းစရာဗျာ။နေရာတကာမှာ လေးလံတုံ ့ဆိုင်းနေတတ်တာက
သူ့မှည ဖြစ်လာရင် တပြိုက်နက်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ချဖို ့ရာ ဉာဏ်မမှီသူ
Main Computer ရေ .. ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ဝင်စားလို့ မေးကြည့်ပါဦးမယ် … ။
ရေးထားတဲ့ ပို့စ်အရေတွက်မှာ တပုဒ်လို့ တွေ့ ရပြီး … ဖြစ်ရပ်မှန် (၄)လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတော့ တချို့သော ဖြစ်ရပ်မှန် ၁၊၂၊၃တွေက … တစ်ယောက်ထဲနဲ့ nick ခွဲပြီးရေးခဲ့သလားဟင် …. ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ..စပ်စုမိတာပါ .. ။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာလေ ….. အယူလေး နည်းနည်း လွဲနေတယ် … ။ အယူဆိုတာထက် .. အဲ့ဒီအယူကို ပြုလုပ်နေသူတွေ ၊ ကျင့်သုံးသူတွေ လွဲတာလို့ မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ် ….. အဲ့ဒါက အားလုံး သိကြမှာပါ … ယာဉ်တိုက်မှု တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုလျှှင် ဝိုင်းအုံကြည့်သူသာများပြီး တကယ်တမ်း အကူညီပေးနိုင်သူ ရှားပါတယ် ။ ဖုန်းဆက် အကူညီပေးတာထက်ပိုပြီး လုပ်ပေးတာမျိုးပါ … ။ အမှူခင်း ကိစ္စဖြစ်လို့ သွေးထွက်သံယိုမဟုတ်လျှင်တောင် ဘယ်အငှားကားကမှ မတင်ချင်ပါဘူး … မတင်ချင်ဘူးဆိုတာကလည်း … အမှူတွဲနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ဆေးရုံရောက်တာနဲ့ … မောင်းပို ့ကူညီတဲ့ ကားပါ မေးမြန်းခံရမှာကြောင့် အချိန်ကုန် ၊ လူစိတ်ရှုပ်မခံကြတာလို့ ထင်ပါတယ် … တချို့တွေ ကူညီချင်တာတောင် ဒီလို အလွဲလေးတွေကြောင့် လက်တွန့် ကြတယ် … ။
နောက်တစ်ခုက ကားတိုက်မှု ဖြစ်ပွားလို့ သွေးသံတရဲရဲဆို ပိုဆိုးပါတယ် .. ဘယ်ပရိုက်ဗိတ်ကား ၊ ဘယ်အငှားကားကမှ မတင်ချင်ကြဘူး အထူးသဖြင့် မြန်မာတွေအယူပေါ့နော် … ကားပေါ်မှာ သေမှာလည်း ကြောက်တာက ပါပါတယ် … ။ မေးမြန်းတာတွေ ရှိမှာလည်း ကြောက်ကြတယ် … ။ ဒါကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တိုင်း သွေးပဲထွက်ထွက် ၊ မထွက်ထွက် …. ရဲက ကားမတားလျှင် … ဘယ်ကားမှ ခေါ်မတင်ချင်ကြတာပါ .. ။ ရဲကတားမှသာ … တင်ချင်လို့မ ဟုတ်ပဲ … မတင်ချင် တင်ချင်နဲ့ တင်သွားရတာမျိုးပါ … ။
နောက်တစ်ခုက .. သွေးတွေထွက်နေလျှင် .. ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ တွန့် ကြပါတယ် … သွေးကကူးစက်နိုင်တဲ့ HIV/ AIDS တွေကြောင့်ပါ ။
ကူညီပေးရင်း ကိုယ်ကပါ .. ကူးစက်ရောဂါရသွားမယ်ဆိုလျှင်လည်း မဖြစ်ဘူးပဲ .. ။ ဒါဆို မကူညီရတာ့ဘူးလားဆိုလည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့ …. ကူညီမယ်ဆိုလျှင်တောင် တခါသုံးလက်အိတ်တွေ ဘယ်သူမှ မပါလို့ နီးစပ်ရာက ကြွတ်ကြွတ်အိတ်လိုဟာမျိုးနဲ့ စွပ်ပြီး ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ် … ။
computerဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါ။Log in လုပ်တာမရလို့ နာမည်ပြောင်းRegisterလုပ်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်(၄)ကိုရေး
ဪ …. ဟုတ်ပါရဲ့ …
ပထမဆုံးကော့မန့်ကို မကြည့်လိုက်မိဘူးပဲ ……. ။ ဒါကြောင့် နည်းနည်း ထူးဆန်းနေသလိုဖြစ်နေတာ …. ။ အခုတော့ရှင်းသွားပါပြီ ။